शिव प्रकाश, (बोस्टन, अमेरिका)
मान्छे, मान्छेको यो संसारमा न त उ मान्छे भेट्छ, न त उ मान्छे देख्छ, न त उ मान्छे बुझ्न सक्छ, न त उ मान्छे बोलेको सुन्छ !
उ डराउँछ- æम यो संसार विरुद्ध जादैछु । संसार उत्तरआधुनिक भै सकेको छ । यो संसार विरुद्ध एक्लो म कसरी लड्न सक्छु ? तर हार्न सजिलो छ ।Æ उसमा साहस आउँछ ।
उ उत्तर आधुनिक साहित्य खोतल्न थाल्छ । कविताहरु पढ्छ – æशरीरमाथि शरीर थुपारेर आफ्नै शरीरको भारले थिचिएर हलचलहिन भएर बसेको अजिंगर जस्तो लाग्छन् कविताहरु । शब्दमाथि शब्द थुपारेर शीर पुच्छर हराएको शब्दको थुप्रो !” शब्दको बोझले थिचिएर निस्सासिएका कविताहरुप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्छ !
हारप्रति विश्वास छ, त्यसैले उ हार स्विाकार्छ ।
उसले आफूलाई खोज्छ- त्यही जंगलमा भेट्छ ! आफैंलाई प्रश्न गर्छ- के म पनि मान्छे हुँ ?”
नोभेम्बर १७, २०१० ।